Maxkamadda Gobolka Hiiraan oo ku guuleysatay in muwaaddin Soomaaliyeed ay usoo celisay Dhul laga haystay +Sawirro – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Maxkamadda Gobolka Hiiraan oo ku guuleysatay in muwaaddin Soomaaliyeed ay usoo celisay Dhul laga haystay +Sawirro
By Aadan Sooyaal / August 8, 2020 August 8, 2020
Buulo-burte-(SONNA)-Guddoomiyaha Maxkamadda Gobolka Hiiraan, Cabdiraxiin Muxumad Taakooy ayaa sheegay in muwaaddin Soomaaliyeed ay usoo celiyeen Dhul laga haystay muddo 30 Sano ah.
Dhulkan oo ku yaalla Degmada Buulo-burte ayaa ahaa mid dhaxaltooyo ah, kaas oo ay Maxkamaddu ku guuleysatay in ay dib ugu soo celiso Gacanta dadkii lahaa, sida uu sheegay Guddoomiye Taakooy.
Guddoomiye Cabdiraxiin Taakooy, oo la hadlay warbaahinta Qaranka isagoo ku sugan Degmada Buulo-burte ayaa sheegay in halkaasi ay u gaareen, xallinta is qab-qabsi xagga Dhul ah iyo dacwadaha madaniga ah oo ka jiray Degmada Buulo-burte.
Mudane, C/raxiin ayaa sheegay inuu halkaasi kula kulmay maamulka Degmada iyo kan Maxkamadda, iyagoo ka wada hadlay sidii Bulshada loo gaarsiin lahaa xukunka Dowliga ah iyo in Dadka laga soo weeciyo in ay caddaalad u raadsadaan meelo ka baxsan garsoorka Dowladda.
Guddoomiyaha Maxkamadda Gobolka Hiiraan, Cabdiraxiin Muxumad Taakooy ayaa intaa ku daray in dhowaan ay kormeeri doonaan Degaanno kale oo ka tirsan Gobolka si ay u fuliyaan xukumada halkaasi yaalla, isla markaana ay Dadka baraan in ay ku kalsoonaadaan Dowladdooda.
Madaxweyne Farmaajo oo ka qeyb-galay dood-cilmiyeed ku saabsan doorashooyinka dalka
Ku-xigeenka agaasimaha guud ee Madaxtooyada Qaranka oo sheegay in ay dhalinyarada dowr fir-fircoon ka qaateen Horumarka dalka+Sawirro
Madaxweynaha Galmudug iyo wafdi uu Hoggaaminayo oo gaaray Cadaado+Sawirro
Taliyaha ciidanka Booliska Soomaaliyeed iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray Baydhabo
Madaxweynaha Jubbaland oo soo dhaweeyey ansixinta heshiiska doorashada
Baarlamaanka dalka oo ansixiyey heshiiska siyaasadeed ee doorashada heer Federaal
Ra’iisal wasaaraha Lubnaan oo iscasilay, muddo bil ka yar oo uu xilka hayey